မနေ့ညနေပိုင်းက အမေစု အိမ်ခြံဝင်းအတွင်းမှာ ပြုလုပ်တဲ့ မွေးနေ့ပွဲ အခမ်းအနား (ဓာတ်ပုံ) ~ ဒီမိုဝေယံ
မနေ့ညနေပိုင်းက အမေစု အိမ်ခြံဝင်းအတွင်းမှာ ပြုလုပ်တဲ့ မွေးနေ့ပွဲ အခမ်းအနား (ဓာတ်ပုံ)
19.6.2011, (6:30 p.m), အမေ့ခြံထဲ အမေ့မွေးနေ့ မှတ်မှတ်ရရ ကြည်နူးစရာ ပုံရိပ်များ
အမေနဲ့ သားတို့ရဲ့ ကြည်နှူးစရာ မြင်ကွင်း...
မနေ့က အမေစုအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းမှာ အမေရဲ့(၆၆)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပွဲအခမ်းအနားကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်..။ ညနေ(၆)နာရီကနေ ည(၉)နာရီထိ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ အမေရဲ့ လုံခြုံရေးတာဝန်ယူပေးတဲ့ ယခင် သုံးရောင်ချယ် ညီအကိုတွေ စီစဉ်တဲ့ အဆိုပါ အခမ်းအနားကို အမေကို လေးစားချစ်ခင်တဲ့ မိတ်ဆွေများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်..။ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဦးကျော်သူနဲ့ဇနီး မရွှေဇီးကွက်၊ တေးရေး ကိုရဲလွင်၊ ကိုဇေယျာသော်စတဲ့ အမေကို လေးစားချစ်ခင်သူတွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်..။
အမေတနေ့လုံး အင်မတန်အလုပ်များခဲ့ပါတယ်..။ အမေအင်မတန် အလုပ်များ၊ ပင်ပန်းနေတဲ့ကြားက ဂျပန်က သုံးရောင်ချယ်အဖွဲ့သား ဟောင်းတွေရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်း စကားလေးကိုတော့ ဝမ်းသာအားရ ပြန်လည် ဖြေဆိုသွားခဲ့ပါတယ်...။
အမေစုနဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်း စကားလေး ပြောခွင့်မရလိုက်ပေမယ့် အမေအသက်ရာကျော် ရှည်ပါစေလို့ ထပ်မံဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ်..။
ဓာတ်ပုံများအတွက် အကိုကြီး ကိုကျော်သူအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်...။
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဂျပန်နိုင်ငံ...
ယနေထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာပါ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန၏...
မနေ့က မန္တလေး ကျောက်ဝိုင်းအတွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့...
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ဆလ...
အညတရ သူရဲကောင်း ဆု အတွက်စကားဝိုင်း ဆွေးနွေးဖလှယ်ပွ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို သရုပ်ဖော် ရ...
မေ့လျော့နေခဲ့သော အာရှတိုက်၏ သူရဲကောင်း ဆလိုင်းကိုတ...
အပီထိုင်ခိုးတဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုး (တိုင်ကြားစာ)
ကချင်ဒေသတွင်ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ပွဲများကို ရပ်ဆိုင်းေ...
ရန်ကုန်တော့ ဖြည်းဖြည်းပေါ့... ရန်ကုန်တော့ ဖြည်းဖြည...
ရုပ်ဝတ္ထုတွေ တိုးတက်ပြီး စိတ်ဓာတ်ခြောက်သွေ့နေတဲ့မြိ...
ကားပေါ်မှာလိုက်လာပြီး ပရိသတ်မိုင်း မထိတဲ့ မောင်မျို...
ဇွန်လ(၁၇)ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာပါ မှားယွင်းဖော်...
ဂန္တဝင်အမေ ကဗျာရှင် (ရွှေဝါရောင်နန္ဒာစရိယ)
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဥရောပသမဂ္ဂဒု-...
ပြည်သူ့ဆေးရုံ စစ်ဆေးရုံ.... ပြည်သူ့ဆရာဝန် စစ်ဆရာဝန...
အမေ့စုရဲ့ မေတ္တာပန်းတို့ လန်းရာမြေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ပွဲ အခမ်းအနား (ကိုရီးယား)...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေသာ ကချ...
ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ လူထုခေါင်...
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ လူ...
အကြမ်းမဖက်အမျိုးသား လှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့မှ ကျင်းပပြ...
မနေ့က အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ကျင်းပတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နှလုံးသားပုံရိပ်များ စဆုံး (မေ...
ယနေ့ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် ပြောကြားတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ မွေးနေ့အမှီေ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ မဲဆောက်နေ မြန...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ မြန်မာပြည်သူလ...
မင်္ဂလာရှိသော မေမေ တေးရေး ..တေးဆို (ဝိုင်မြစ်ချို)♫ ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၆၆)နှစ်မြောက်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် Genera...
ကျေးဇူးမေမေ ကျေးဇူးပါမေမေ...♫ ♫ ♫
တစ်နပ်စား လမ်းစဉ် ဆောင်းပါးရှင် (အရှင်ဥက္ကဋ္ဌ).
ကမာ့္ဘဒုက္ခသည်များနေ့ အကြို ဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနား ဓာတ်...
လူထုခေါင်းဆောင် (သို့ ) မတရားသော အမိန့် အာဏာမှန်သမ...
ပန်းမြတ်ဧကရီ ( ၀ါ ) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကဗျာရှင် (ဗ...
၀ါရင့်သတင်းစာဆရာကြီး လူထုစိန်ဝင်းအား လူထုခေါင်းဆော...
သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓသာသနာ့တက္ကသိုလ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား......
ကရုဏာလက် မှ ကမ္ဘာမြေကိုကျေးဇူးဆပ်ခြင်း
လျှက်တပြက်မြတ်ခိုင်သို့ (ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလှို...
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (...
မြန်မာပြည်တွင်းမှ လူငယ်လူရွယ်များရဲ့ နိုင်ငံရေး အက...
ဓါတ်ဆီ၊ ဓါတ်ဆံ တို့ရဲ့ ဟာဒရရွှင်သွေး....
အညံ့ခံကာ နေကြတော့မှာလား ဆောင်းပါးရှင် (မင်းသုည)
KIA တပ်မတော်မှ မြန်မာ့တပ်မတော် တပ်ဖွဲ့ဝင်များသို့ ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြ...
ရုရှားပြန် စစ်ဗိုလ်အုပ်စုလုပ်ရပ်အား အရေးယူရန် ပုဂ္ဂ...
ခရစ်တော်၌ အိပ်ပျော်ခြင်း (ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒ...
အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး အင်အားစု (မြန်မာပြည်) ရဲ့ ...
သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးအား လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆ...
ရန်ကုန် မြို့တော် တိုးချဲ့ရေး စီမံကိန်း.... ဆောင်ပ...
ချိန်ခါသင့်ပြီ ဆောင်းပါးရှင် (အောင်မျိုးထွန်း)
ထာဝရ နှင်းဆီ (သို့မဟုတ်) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆောင်...
ရိုက်တာ သတင်းဋ္ဌာနရဲ့ ၁၉၆၀ခုနှစ်က ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ခေါ...
Ever Win Media မှ ဝန်ထမ်းများရဲ့ အဖိနှိပ်ခံ ကျား/မ...
၁၉၈၃ခုနှစ်အာဇာနည်ဗိမာန် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ရှားပါးရုပ်...
အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေ ဈေးကျဆင်းမှုဂယက် (၂) (ဆောင်းပါးရှ...
အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေ ဈေးကျဆင်းမှုဂယက် (၁) (ဆောင်းပါးရှ...
ကနေဒါနိုင်ငံ Quebec ပြည်နယ် City of Saint-Luc မြို...
ရှမ်းပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် စပ်အောင်မြတ်သို့ တိုင်ကြ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ ဓာတ်ပုံ...
အသိမှတ်ပြုတယ်ဆိုတာ စိတ်သတ္တိရှိမှ လုပ်ရဲတဲ့အလုပ်ဖြစ...
" BG "သွေးအကူအညီပေးရေး အဖွဲ့၏ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်ေ...
မြန်မာပြည်က ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်း၏ မလိမ့်တပတ် ဝ...
တချိန်က ရွှေထီးဆောင်းခဲ့တဲ့ မြန်မာ တတိယပိုင်း (ဆောင...
ယနေ့ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ အ...
အချိန်ရှိသေးတယ် နောက်ဆုံးလို့ နှုတ်မဆက်ခင်မှာ စဉ်း...
ရခိုင်မြောက်ဦးမြို့မှ ရှေးဟောင်း ဆင်းတုတော်များေ...
ယနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၃နာရီခန့်က မြောက်ဦး...
ဂျွန်မက်ကိန်း နေပြည်တော်သွားတာ ဘာထူးလဲ...???
BG သွေးအကူအညီပေးရေး အဖွဲ့၏ လှုပ်ရှားမှု သတင်း၊ ဓာ...
ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန် သံရုံးမှ ထုတ်ပြန်တဲ့ အမေရိကန...
အညတြသူရဲကောင်းဆု ချီးမြှင့်ရေး ကော်မတီ(ဂျပန်) သတင...
ရိုက်တာ သတင်းဋ္ဌာနရဲ့ ၁၉၈၈အရေးတော်ပုံ ကာလကြီးအတွင်းက...
၁၉၉၅ခုနှစ်က လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပထမ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမေရိကန် ဆ...
ယနေ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ အဖွဲ့ချု...
ဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင်၊ NLD၊ စင်္ကြာမှန်ပြောင်းနှင့်ေ...
အမေ့အိမ် ပညာဒါနကျောင်း (လှိုင်သာယာ)၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ပ...
အဖေ့ကို ပြန်လွှတ် ပေးကြပါတော့ (ကဗျာရှင် ဗမာ့သွေး)
၁၉၉၁ခုနှစ်က ရိုက်တာ သတင်းဋ္ဌာနက ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ ငြိ...